Dishonest Life Partner - OMG Solutions များကိုဖမ်းယူရန် GPS Tracker အသုံးပြုခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများ
လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖောက်ပြန်ယနေ့ခေတ်အသုံးအများဆုံးပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်မည်သူမဆိုနာမည်ကြီးများ၊ အားကစားသမားများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအပါအဝင်သားကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးလှပသောလူများသည်မိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးသောဆက်ဆံရေးကိုလုံခြုံအောင်မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အဘယ်အခွင့်အရေးများရှိပါသလဲ။ ထင်ရသည်မှာကြာရှည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက်ထပ်မံကျဆင်းလာရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်လာသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ဇနီးဖြစ်သူသည်တန်ဖိုးမ ထား၍ စတင်ခံစားနေရပြီး၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာငြီးငွေ့စရာဖြစ်လာပြီးအိမ်သို့မပြန်ချင်တော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပြissuesနာများသည်ပြင်းထန်သောပြproblemsနာများကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးရန်ဇနီးအားဖိအားပေးသည်။ လှပသောအိမ်ထောင်ရေးဘဝသည်အောက်သို့ဆင်းလာသည့်အခြေအနေပင်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်သွေးဆောင်မှုများရှိကြောင်းရှည်လျားသောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအကြားရှုပ်ထွေးသည့်အမှန်တရားကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားသင်၏ဘဝကိုလုံးလုံးပျက်စီးစေနိုင်သောလမ်းစဉ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
သင်၏ဇနီးကမှားယွင်းစွာလုပ်နေတာကိုတွေ့ပြီးသင်၏သံသယမှန်ကန်မှုကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေလျှင် GPS Tracker နှင့်ပတ်သက်သောအဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်လက်ဖြင့်သင်ရရှိနိုင်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်။ သင်၏အဖြူရောင်၏တည်နေရာကိုခြေရာခံပြီးသူမဘယ်မှာရှိကြောင်းနှင့်ယခုသူမဘာလုပ်နေသည်ကိုသတင်းပို့ရန်သင့်ထံပြန်လာပါ။ မပူပါနဲ့! မျက်မှောက်ခေတ်ခေတ်တွင်ပစ္စည်းအသစ်များသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့်လူတို့အတွက်သုံးရန်ကိရိယာအလုံအလောက်မရှိသည့်ယခင်ဘဝနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘဝကို ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်စိုးရိမ်ပူပန်စရာများရှိပါကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်၏ဘဝကိုလုံးဝမဖျက်ဆီးမီဖြေရှင်းနည်းများရှာဖွေခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်ကိုလိမ်လည်ရန်ကြိုးစားနေသူသို့မဟုတ်သင်၏ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်သင့်တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင်၏ဇနီးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်မည့်သီးသန့်စုံထောက်တစ်ယောက်ငှားရန်သင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်တစ် ဦး သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းသင်ဤခေတ်မှီနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သင်၏အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးစုံထောက် (သို့) PI Now ကိုငှားရမ်းခြင်းအတွက်လုံလောက်သောပမာဏကိုမဖြုန်းတီးဘဲသတင်းအချက်အလက်ကိုပင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သေးငယ်သည့်လူတစ် ဦး ၏တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ site ကိုနေရာချထားရန်စစ်တပ်ဂြိုဟ်တုများအသုံးပြုခြင်းကိုပြုလုပ်သောခေတ်သစ်နည်းပညာကြောင့်ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ ရှေ့သို့မသွားမီ၊ GPS ယူနစ်နှစ်မျိုးရှိသည်ကိုသင်သိသင့်သည်။
ဂျီပီအက်စ် Logger မှ
GPS Logger ဆိုတာဘာလဲ။ ငါဘယ်လိုသုံးနိုင်လဲ။
၎င်းသည်အကြမ်းဖက်ခံရသူ၏ခရီးသွားနှုန်း၊ တည်နေရာနှင့်အချိန်အတိအကျကို၎င်းတည်နေရာနှင့်စသည်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဗီဒီယိုအသံဖမ်းစက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ကုန်ဆုံးသည်ကိုသိလိုလျှင်ဤစက်သည်သင့်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ အလေးအနက်ထားပြောရလျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ဇနီးသည်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်၏ဇနီးသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အိမ်၌လည်စည်းသို့မဟုတ်မိုတယ်တစ်လုံးတွင်သူနှင့်တွေ့ဆုံနေသည်ဆိုပါစို့၊ ထိုကိရိယာကိုသုံးပြီးသူသည်သူဘယ်ရောက်နေသည်၊ မည်မျှကြာသည်ကိုတိတိကျကျအတည်ပြုလိမ့်မည်။ အရွယ်အစားမှာ၊ သေးငယ်ပြီးသင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်နေရာချနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင်ဤစက်ကိုသင်၏ပစ်မှတ်သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်တွင်တင်ရမည်။ သင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါ၎င်းအတွက်သင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုကားထဲမှထုတ်ယူပါသို့မဟုတ်ကားထဲမှထုတ်ယူပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာထဲသို့ချိတ်ဆက်ပါ။ ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်အား အသုံးပြု၍ ၎င်းကိရိယာသည်စာသားပုံစံဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။
Real-time GPS ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
၎င်းသည်အဆင့်မြင့် Logger GPS ပုံစံဖြစ်ပြီးသင်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီမြင်တွေ့စေနိုင်သည်။ သင်ဤ tool ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးသူမ၏ဖောက်ပြန်မှုကိုသက်သေပြရန်သင့်လက်တွဲဖော်၏နေရာအတိအကျကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ Logger GPS တွင်လစဉ်ကြေးမရှိပါ၊ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောမိုဘိုင်းကွန်ယက်ကို အသုံးပြု၍ အချက်အလက်အားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးသောကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းပေးသွင်းရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာအားလုံးအကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ လစဉ်ကြေးပေးရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည့်ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်အရေအတွက်နည်းပါသည်။
အသံမှတ်တမ်းများနှင့် GPS ခြေရာခံခြင်းစနစ်များ
မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်မင်းမှာနောက်ကွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာတွေ့နိုင်မယ့်ကိရိယာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ သင့်ဇနီးကသင့်ကိုအချိန်မရွေးလိမ်ပြောရင်ဒီပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးပြီးဒီနေရာကိုအလွယ်တကူသိနိုင်တယ်။ အချို့ကိရိယာများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
သူလျှို Voice ကို Recorder
ကား GPS ခြေရာခံခြင်း
Mini Pendant အသံအသံဖမ်းစက်
သင်၏ဇနီးကိုသူလျှိုရန်မည်သည့်ကိရိယာ၊ သူသွားသည့်နေရာနှင့်သူနှင့်တွေ့ဆုံသူကိုသင်ပိုမိုသိနိုင်သည်။ သင်တွေ့ရှိသည်နှင့်သင်၏ဘဝသည်ပျက်စီးခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာမျိုးကို ၀ ယ်ယူရန်ရည်ရွယ်ထားပါကသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်သည် OMG-Solutions.com သင်၏လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတန်ဖိုးရှိသောကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လင့်ခ်ကို လိုက်၍ တစ်ပြိုင်နက်တည်း
GPS Tracking System ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းသင်သိကောင်းသိလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းတို့သည်မည်သည့်လမ်းထောင့်တွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေပစ်မှတ်၏တည်နေရာကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ထင်မြင်ချက်အရ၎င်းသည်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်တိကျတဲ့လူတစ်ယောက်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ဇနီးသည်ရုံးခန်းတွင်အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်ဆက်ဆံနေပါကအလုပ်များစွာကြောင့်နောက်ကျရန်အတွက်မည်သည့်ဇာတ်လမ်းမဆိုဆက်ရှိနေလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောခင်ပွန်းများအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုမှာအချို့သော GPS ခြေရာခံသည့်စနစ်သည်မိုက်ကရိုဖုန်းများဖြင့်လာသည်။ ထိုကိရိယာကိုရပြီးသောအခါသင့်အားဇနီးဖြစ်သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသူမအကြောင်းကြားမီမကြာမီသင်ခိုင်းရလိမ့်မည်။
အချို့သောအရေးကြီးသောပြsomeနာများကြောင့် GPS Trackers များသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်လျှင်အနားယူရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏နောက်စက်ရုံသည်ဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ရပ်! သင်၏ဇနီးသည်ကသင့်အားလိမ်လည်လှည့်ဖြားနေသည်ကိုအတည်ပြုရန်မိုဘိုင်းကိရိယာများ၊ သူလျှိုအသံဖမ်းစက်များသို့မဟုတ်သူလျှိုကင်မရာများကိုသုံးရန်သင့်အတွက်အဖြေရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာမျိုးဖြင့်သင်သည်အီးမေးလ်များ၊ ဖုန်းလမ်းညွှန်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများရှိ metadata များ၊ Skype မှတဆင့်ချက်ချင်းစာတိုများနှင့်အခြားအရာများကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။
6584 စုစုပေါင်း Views စာ 1 Views စာယနေ့တွင်